ဆၧၥီၪ့လိၪဘၪဆဲၫ့ ဆၧဖ့ၪလၫ့ယၫ့ၥၭဆၧ. | Radio Veritas Asia
ထီးလၩ့နၥံၪအၥၭ ဘဲၫၥိၭနၥံၪထီးမၩနၥံၪ အဆၧတီၩဆၧလီၩ့လၧၦၡၩအမ့ၬယၫ ဘဲၫအမိဒၪဘၪဝ့ၫ အၥိၭနီၪလဂ့ၩ. အ့ၪလမွဲဘၪဘဲၫနီၪတၭ, နၥံၪအဘိၪ့ အီၪလၧနၥံၪအဖါလၧမူၭခိၪနီၪအ့ၬ.- မၩအၥၭဘဲၫ နီၪတၭ, ထီးနအ့ၪဖ့ၪလၫ့ဆၧယၫ့ၥၭလဖၪနီၪ, ထီးအူၪထၪ့ခွ့ၩလၧနမ့ၬယၫ, ဘဲၫၦအၪ့လီၫဆၧမၩဝ့ၫလၧ ၥရိၬဖၧၩ့ဒဲလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ, ဘဲၫၦၡၩမိစံၭထၪ့အၪ့အူၭဝ့ၫ အၥိၭနီၪလဂ့ၩ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, အဝ့ၫၥံၪန့ဘၪအဘိၪ့ဒၪဝ့ၫလီၫ.-
အ့ၪမွဲနဝ့ၫဒၪယီၩ,ထီးနအ့ၪ ဖ့ၪလၫ့ဆၧယၫ့ၥၭနီၪ, ဘဲၫၥိၭနဆၧဖ့ၪလၫ့ယၫ့ၥၭ ထီးအီၪဖျီၪလဂ့ၩတၭ, ဆၧလၧနစူၪထွ့ၪမၩဝ့ၫနီၪ, ထီးဒုၭၥ့ၪယၫနစူၪစ့ၪလဂ့ၩ.- နဖါလၧအဒၪဘၪလၧဆၧအီၪၥူၪအဖၧၩ့နီၪ, အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫ မိဖ့ၪလၫ့ဆၧဘိၪ့လၧ နၧၩလီၫ.
နအ့ၪဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪ, ထီးအီၪဘဲၫၦအၪ့လီၫဆၧအၥိၭနီၪလဂ့ၩ. အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪအဲၪဝ့ၫလၧအဘၩဆိၪဖၪ ဆၧၫ့ထုၪ့လၧၥရိၬဖၧၩ့, ဒဲလၧဖၧၩ့မုထဲၩ့ဖၭအခၪ့ထံၭ ဘဲၫအမိအီၪဖျီၪ လၧၦၡၩအမ့ၬယၫအၥိၭ နီၪလီၫ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, အဝ့ၫၥံၪန့ဘၪယူၭအဘိၪ့ဒၪဝ့ၫလီၫ.-
အ့ၪမွဲနဝ့ၫဒၪယီၩ ထီးနအ့ၪဘၩဆိၪဖၪဆၧနီၪ, ထဲၩ့နုၬလၧနဒူၭဖၧၩ့တၭ, ကၭဘံၭ ထၬနတရၫ့တၭ, ဘၩဆိၪဖၪ လၧနဖါလၧအအီၪၥူၪနီၪဆံၭ. နဖါလၧအဒၪဆၧ လၧဆၧအီၪၥူၪအဖၧၩ့နီၪ, မိ ဖ့ၪလၫ့ဆၧဘိၪ့လၧနၧၩလီၫ.
နၥံၪအ့ၪဒုၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩတၭ, ထီးမၩနၥံၪအမ့ၬၥံၫယူၭၥံၫယူၭ ဘဲၫၦလၧအအၪ့လီၫဆၧအၥိၭနီၪလ ဂ့ၩ, အဂဲးဘဲၫယီၩ အဝ့ၫၥံၪဘဲၫအဒုၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩနီၪ မိအီၪဖျီၪထၪ့လၧၦၡၩအမ့ၬယၫအၥိၭတၭး မၩၥံၫယူၭလၩ့အမ့ၬလီၫ. ယလီၩဘၪနၥံၪတီၩတီၩယီၩ, အဝ့ၫၥံၪန့ဘၪယူၭအဘိၪ့ဒၪဝ့ၫလီၫ.- အ့ၪမွဲနဝ့ၫဒၪယီၩ, ထီးနအ့ၪဒုၪဆၧအၪ့ဆၧအီၩတၭ, ဘဲၫၥိၭနဒုၪဆၧအၪ့ ဆၧအီၩနီၪ, ထီးအီၪဖျီၪဘၪလၧၦၡၩအမ့ၬယၫလဂ့ၩတၭ, ဘဲၫအမိအီၪဖျီၪ လၧဖါလၧအအီၪၥူၪဝ့ၫအမ့ၬယၫအၥိၭတၭ, ဂုၪနခိၪဎွံၪ, ဖျါခွံၬနမ့ၬဆံၭ.- နဖါလၧ အဒၪဆၧလၧဆၧအီၪၥူၪအဖၧၩ့နီၪ, မိဖ့ၪလၫ့ဆၧဘိၪ့ လၧနၧၩလီၫ.